संक्रमितले भरिए हेटौंडा अस्पताल, थप ३ जनाको मृत्यु «
संक्रमितले भरिए हेटौंडा अस्पताल, थप ३ जनाको मृत्यु
कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएपछि हेटौंडा अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार कक्षका सबै बेड भरिएका छन् । अस्पतालका कोभिड–१९ इन्चार्ज डा. सागरका काफ्लेका अनुसार ४६ बेड क्षमताको कोभिड उपचार कक्ष बिरामीले भरिएका हुन् ।
अस्पतालमा १४ बेड आइसियू, १६ बेड एचडीयू, १६ बेड स्टेप डाउन र ४ वटा भेन्टिलेटर सञ्चालनमा रहेको डा. काफ्लेले बताए । बिरामीको आवश्यकताका आधारमा पालैपालो भेन्टिलेटरको प्रयोग गरिँदै आइएको छ । अस्पतालमा हाल आईसीयूमा १५ जना, एचडीयूमा १६ जना र स्टेपडाउनमा १६ जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन् । उपचाररत ३ जना कोरोना संक्रमितको अवस्था भने गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
मकवानपुरमा निको हुनेको संख्याभन्दा नयाँ संक्रमितको संख्या निकै बढिरहेका कारण यही अवस्था रहिरहे अस्पतालले नयाँ बिरामी भर्ना लिन नसक्ने अवस्था रहेको कोभिड–१९ इन्चार्ज डा. काफ्लेले बताए । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि अस्पतालले स्टेप डाउनका बेडलाई संक्रमितको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा बढाउने तयारी भइरहेको डा. काफ्लेले बताए ।
संक्रमितले भरिए अस्पताल
मकवानपुरमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालमा उपचारत तीन जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड इन्चार्ज डा. सागर काफ्लेले जानकारी दिए ।
मृत्यु हुनेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका दुई जना र भीमफेदीका एक जना पुरुष रहेका छन् । भीमफेदी गाउँपालिका–६ का ५९ वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान १० बजे मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१ का ५० वर्षीय पुरुषको पनि बुधबार बिहान ९ः२० बजे मृत्यु भएको हो । हेटौंंडा उपमहानगरपालिका–३ का ६५ वर्षीय पुरुषको मंगलबार साँझ नै मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । योसँगै हेटौंडा अस्पतालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १४ पुगेको छ ।
यसैगरी मकवानपुरमा बुधबार एकैदिन एक सय ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । वैशाख २७, २८ र २९ गते लिइएको दुई सय ७० जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा एक सय ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भोला चौलगार्इंले जानकारी दिए । संक्रमित हुनेमा ९९ सय जना पुरुष र ८३ जना महिला रहेका छन् ।
बुधबार थपिएका संक्रमितमध्ये सबैभन्दा धेरै हेटौंडा–४ का ३० जना हेटौंडा–५ का २४ जना, हेटौंडा–९ का २६, हेटौंडा–८ काक १९, हेटौंडा–२ का १३ जना रहेका छन् । यसबाहेक मकवानपुरगढी, भीमफेदी र मनहरि गाउँपालिकामा पनि संक्रमित फेला परेका छन् ।